« Toe-tsaina » -
AccueilTresaka« Toe-tsaina »
13/09/2017 admintriatra Tresaka 0
Mbola mitana ny sain’ny maro ilay lozam-piarakodia nahafatesan’olona tetsy amin’ny Rocade Andohatapenaka afakomaly iny. Toa eo amin’ilay toerana nitrangan’io loza io foana mantsy no natetika nisehoan’ny loza mahatsiravina. Hamoizana ain’olona hatrany, ary potika tanteraka ny fiara. Raha mijery maimaika dia tahaka ny hoe « misy zavatra hafahafa » mihitsy eo amin’ilay toerana. Ny hafa aza moa miresaka any anaty tambazotra sosialy any fa hoe « misy lolo ».
Namaly izany resaka izany avy hatrany ny minisitry ny Fitaterana omaly. Voatery nandray andraikitra izahay, hoy izy, satria be loatra ny loza miseho teo amin’io toerana io. Raha ny fenitry ny lalambe migodana tahaka io lalam-baovao Rocade io, dia tsy azo asiana “casseur de vitesse” kanefa tsy maintsy hapetraka izany ho fitsinjovana ny ain’olombelona. Lahitokana ny aina.
Ny fanahiana mipetraka dia misy foana. Na dia handray fepetra mihoatra ny mety aza ny minisitera tompon’andraikitra, dia tsy hahafoana ny hetraketrak’ireny mpampiasa fiara ireny izany. Fififiry tokoa moa ny tanora manao fialamboly ny ainy amin’iny lalambe Rocade iny, ka manao “pointe” isaka ny faran’ny herinandro. Sady mamo no mandeha mafy amin’ny fiara be feo, ary hifaninanana mihitsy izay manana fiara matanjaka sy mandeha mafy. Ny polisy mandrara sy mandroaka azy ireo eny indray no mahazo fandrahonana satria zanaka mahitahita avokoa ny ankamaroan’ireny tanora mpanao “pointe” ireny.
Raha tsy ny tenan’ilay olona mitondra fiara mihitsy no resy lahatra fa mahafaty ny mitrifana diso tafahoatra eo amin’io Rocade io dia tsy hahasakana ny loza mety hitranga eo, na hosoloina vatobe aza ny “casseur de vitesse” eo. Mba maro ihany ny fiara mivezivezy eo fa ireo izay mahalala oniny amin’ny hafainganam-pandeha toa tsy maninona ihany.
Any amin’ny toe-tsaina sy toe-panahy nakana ny “permis” entina mamily fiara mihitsy no olana fa tsy eo amin’ny fipetrak’ilay fiolahana, na ny toetoetr’ilay Rocade akory. Firy amin’ireny mpamily amin’ny alina ireny moa no hita mandeha amin’ny lalana tsy tokony handehanany akory, satria manararaotra fa alina ny andro. Any amin’ny toe-tsain’ny isam-batan’olona mihitsy no hamafisina amin’io familiana mampidi-doza io, fa tsy any amin’ny tompon’andraikitra mpandamina ny fitaterana sy ny fifamoivoizana intsony.